Etu esi emepụta egwu ọkpụkpọ na YouTube 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
YouTube doro anya na video nkekọrịta Portal par kacha mma. Kemgbe ntọala ya, na afọ 2005 teknụzụ dị anya, ọ gbanweela ụzọ anyị si aghọta Internetntanetị. Taa YouTube dị ka vidiyo nke ụdị dị iche iche: site na nyocha, nkuzi, vidiyo egwu, site na trailers nke ihe nkiri ọhụrụ na egwuregwu vidio na-ejedebe na pọdkastị. Na nkenke, na YouTube ọ dị mfe ịchọta vidiyo nke mmasị anyị, maka ụtọ niile.
Iji hụ ha nke ọma, anyị ga-ahụ n'isiokwu a, otú ike a playlist, nke dịka ị nwere ike ịkọ nkọ site na aha ahụ, abụghị onye ọzọ karịa otu listi ọkpụkpọ, na nke vidio anyị ga-egwu na-akpaghị aka otu ọzọ. Okwu a maara ndị mere listi ọkpụkpọ ha na egwu mp3 ha ma ọ bụ ndị metụtara Spotify.
Ọ bụrụ na vidiyo masịrị gị masịrị gị, ana m akwado ka ị lee isiokwu anyị anya ebe anyị ga-akọwa otu esi ebudata vidiyo YouTube.
Mepụta ndepụta egwu YouTube na PC gị
Ihe ọ bụla ị chọrọ, ịmepụta listi ọkpụkpọ na desktọọpụ YouTube dị mfe, sọsọ soro usoro ndị edepụtara n'okpuru:
gaa na saịtị YouTube site na PC ma ọ bụ Mac;
wee banye na akaụntụ Google gị;
chọta vidiyo ịchọrọ ịgbakwunye na listi ọkpụkpọ gị;
n'okpuru vidiyo, pịa bọtịnụ "Chekwaa";
a menu ga-emeghe site na nke ị nwere ike họrọ fanye nkiri n'ime autoplay ndepụta "Le anya“, Ma ọ bụ na otu nke ugbua kere listi ọkpụkpọ;
N'otu menu ahụ, ị ​​nwekwara ike ịmepụta listi ọkpụkpọ ọhụrụ site na ịpị na "Mepụta egwu ọhụụ";
ga-egosi n'okpuru ebe abụọ ọzọ, nke "aha"Na onye raara nye nhọrọ nzuzo ịhọrọ maka ndepụta ọkpụkpọ ("Privado","Edeghị ya", E"Bipụta");
n'oge a ị nwere ike pịa "Mepụta“Ma malite itinye obere vidiyo na ya.
Iji banye, gee ntị, ma ọ bụ dezie listi ọkpụkpọ, pịa "Nchịkọta. ihe nchọgharị adreesị mmanya Adreesị bara ezigbo uru ịkekọrịta ndepụta ọkpụkpọ ahụ.
Ọzọkwa, enwere ụzọ dị mfe iji tinye vidiyo na listi ọkpụkpọ anyị ọbụlagodi na ndepụta nsonaazụ ọchụchọ, ma ọ bụ nanị gafere òké ahụ na vidiyo nke mmasị anyị, ị ga-ahụ bọtịnụ ahụ na ntụpọ atọ na-etinye aka n'akụkụ aha vidiyo ahụ. Site na ịpị ya na òké, ị nwere ike họrọ ihe "Chekwa na listi ọkpụkpọ".
Mepụta ndepụta ọkpụkpọ na ngwa YouTube site na smartphones na mbadamba
Mepụta listi ọkpụkpọ na ngwaọrụ mkpanaka yiri nnọọ ịmepụta egwu ọkpụkpọ na kọmpụta desktọọpụ, ị ga-:
imeghe ngwa YouTube na ngwaọrụ gị;
ohere bụ akpaka, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ akaụntụ Google, ngwa ahụ ga-ajụ gị onye ịchọrọ iji;
N'oge a, ị kwesịrị ịchọta vidiyo nke mmasị gị. N'okpuru ebe a na-egwu egwu bụ "Chekwaa";
ọ bụrụ na ị pịa ma jide bọtịnụ ahụ, ihuenyo yiri nke ahụ na nseta ihuenyo ahụ ga-apụta, ebe ị nwere ike ịhọrọ itinye clip ahụ na listi mbụ e mepụtara ma ọ bụ ebe ị nwere ike ịhọrọ ịmepụta nke ọhụrụ;
na nke a, pịa n'elu "Egwuregwu ọhụrụ";
ozugbo ịpịrị ị ga-abanye aha ndepụta vidiyo na ntọala nzuzo ("Privado","Edeghị ya", E"Bipụta");
Ozugbo anyị kere anyị playlist anyị ga-adị njikere itinye niile videos na anyị na-ahọrọ.
Zọ ngwangwa ịgbakwunye vidiyo na listi ọkpụkpọ anyị bụkwa site na ndepụta nsonaazụ ọchụchọ bụ pịa bọtịnụ ahụ na ntụpọ atọ edebere n'akụkụ aha vidiyo ahụ wee họrọ ihe ahụ "Chekwa na listi ọkpụkpọ".
Iji nweta ihuenyo nwere listi ọkpụkpọ gị, ikekwe dezie ma ọ bụ ịkekọrịta ha, na ala nke ngwa YouTube, pịa pịa bọtịnụ ".Nchịkọta".
Nzuzo nzuzo: Nkeonwe, edepụtaghị ya mi Bipụta n'ụzọ zuru ezu
Ndepụta listi ọkpụkpọ abụọ na vidiyo nwere ike ịnwe ọkwa atọ nke visibiliti na YouTube., anyị na-emikwu ha miri ka ị mara mgbe niile onye ị ga-ahọrọ:
Privado, nke a bụ nhọrọ kachasị mfe niile, ebe ndepụta ọkpụkpọ ga-adịrị naanị gị onye mepụtara listi ọkpụkpọ ahụ. Ndepụta egwu ahụ agaghị apụta na nchọta onye ọrụ ọ bụla.
Edeghị ya, bụ nhọrọ dị n'etiti, nke ndepụta ọkpụkpọ ga-ahụ naanị ndị nwere njikọ ya, yabụ ị ga-enye njikọ nke listi ọkpụkpọ ị mepụtara nye ndị nwere mmasị.
ỌhaNke a bụkwa nhọrọ dị mfe nghọta, nke onye ọrụ ọ bụla ga-enweta ya site na nyocha yana site na njikọta kpọmkwem.
Passei Direto: otu esi eji ngwa ọmụmụ ihe n'ịntanetị?
Spotify Weebụ: Gee egwu n'efu na enweghị mgbasa ozi
Otu esi emepụta avatar nke gị na Facebook
Usoro gam akporo WebView: gịnị bụ ọ? Enwere ike wepu ya?
Audiobooks: free downloads nke Italian na mba ọzọ audiobooks
Esi lelee ma ọ bụrụ na Instagram dị ala ma ọ bụ enweghị ike ịchọta ya
Ngwa kachasị mma maka ịge ntị na akwụkwọ ọdịyo
Etu ibudata vidiyo na tọghata ha na YTD Video Downloader
IPTV Kachasị Mma iji Lelee IPTV Mfe
Esi nyefee WhatsApp chats si gam akporo na iOS
Otu esi agba ọsọ na gam akporo: usoro dị irè!
Mkpakọrịta na Facebook: mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ndị ọhụụ
Zoputa obere nwoke ... jiri oke!